Baarlamaanka Puntland oo ansixiyey sharci lagu mamnuucayo beecinta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. – Radio Daljir
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyey sharci lagu mamnuucayo beecinta iyo isticmaalka mukhaadaraadka.
Garowe, Nov 24 – Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa fadhigoodii shalay cod aqlabiyad ah ku ansixiyey sharci ay soo gudbisay xukuumada Puntland oo mamnuucaya beecinta iyo isticmaalka mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan.
Sharciga ayaa hage u noqon doonta maxkamadaha, isla markaana tafaasiil ka bixinaya ciqaabta ciddii lagu qabto ka ganacsiga iyo isticmaalka mukhaadaraadka sida khamriga, xashiishka iyo wixii la mid ah.
Afhayeenka baarlamaanka Puntland Md. C/rashiid Maxamed Xirsi oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in kulanka ay ka soo xaadireen inka badan 40 mudane, ayna isku raaceen dejinta iyo dhaqangelinta sharci mamnuucaya beecinta iyo isticmaalka mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan.
Md. Xirsi oo shaaciyey natiijada codaynta ayaa sheegay in 34 ka mid ah mudanayaashu ay u codeeyeen dhaqangelinta sharciga mamnuucida mukhaadaraadka, halka 6-da kalena ay isugu jireen kuwa ka aamusay, ama diiday.
Md. Xirsi ayaa digniin u jeediyey dadka ka ganacsada mukhaadaraadka ay ka mid ka yihin khamriga iyo xashiishada, isagoo sheegay in ay ciqaab mutaysan doonaan.
Hawlgallo ay marar badan sameyeen ciidamada bilayska ee Puntland ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa waxaa ay ku qabqabtaan mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan oo ay ugu badan tahay khamrigu.
Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa waxaa u socda kalfadhigoodii caadiga ahaa.